သမ္မာကျမ်းစာ၏သမိ််ုင်း - ဘယ်သူကသမ္မာကျမ်းစာက ိုရေးခဲ့သလဲ? - ဘာကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာက ယုံကြည်အားထားရသလဲ?
သမ္မာကျမ်းစာရဲ့သမိုင်း၊ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့တင်ဆက်ဟန်ဟာ အခြားအခြားသော ဘာသာရေးကျမ်းများနဲ့မတူ ထူးခြားပါတယ်။…
သမ္မာကျမ်းစာ၏သမိုင်း - သမ္မာကျမ်းစာကို ဘယ်သူရေးသားခဲ့သလဲ?
သမ္မာကျမ်းစာ၏သမိုင်း - သမ္မာကျမ်းစာကို နှစ်ပေါင်း ၁၅ဝဝ အတောအတွင်းမှာ ကျမ်းရေးသူပေါင်း ၄ဝ ခန့်မှ ရေးသား ခဲ့ကြတယ်။ အခြားဘာသာရေးစာပေများနဲ့မတူ၊ သမ္မာကျမ်းစာဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်များ၊ နေရာ ဒေသများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ အချီအချပြောဆိုချက်များကို ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းတစ်ပုဒ်သဖွယ် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ သမိုင်းသုတေသီများနဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသီများက ကျမ်းစာရဲ့စစ်မှန်မှုကို ထပ်ခါတလဲလဲ အတည်ပြုကြပါတယ်။
ဘုရားသခင်က ကျမ်းပြုစုသူများရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာရေးဟန်နဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်များကို အသုံးပြုပြီးတော့ သူဘယ်သူလဲ၊ သူ့ကိုသိကျွမ်းတာဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို ဖွင့်ပြပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းရေးသားခဲ့သူ အယောက် ၄ဝ စလုံးက တစ်ခုတည်းသောအဓိကသိတင်းစကားကို တစ်သမတ်တည်း အပြောင်းအလဲမရှိ ဆောင်ကျဉ်းခဲ့ကြတယ်။ ကျနော်အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားဟာ ကျနော်တို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးရဖို့ အလိုရှိတယ်။ သူ့ကိုသိကျွမ်းဖို့နဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ ကျနော်တို့ကိုခေါ်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာက ကျနော်တို့ကို စေ့ဆော်ရုံမက လူ့ဘဝနဲ့ ဘုရားအကြောင်းကို ရှင်းပြပါတယ်။ ကျနော်တို့မေးလောက် တဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးကို အဖြေမပေးပေမယ့် လုံလောက်တဲ့အဖြေတွေ ပေးပါတယ်။ ဘဝကို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အကြင်နာမေတ္တာရှိရှိ ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲ၊ အခြားသူတွေကို ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်တယ်။ ခွန်အားနဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ရယူဖို့ ဘုရားကိုကိုးစားဖို့၊ ကျနော်အပေါ်ထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ခံစားပျော်ရွှင်ဖို့ ကျနော်တို့ကို တိုက်တွန်းအားပေးတယ်။ ထာဝရအသက်ကို ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်သလဲဆိုတာလည်း သမ္မာကျမ်းစာက ပြောပါတယ်။
ကဏ္ဍအမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ အထောက်အထားများက သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှန်ကန်မှုနဲ့ ဘုရားကိုယ် တော်တိုင်ဖွင့်ပြမှုအားဖြင့် ကျမ်းပြုရေးသားတယ်ဆိုတဲ့အဆိုကို ရပ်တည်ထောက်ခံပေးပါတယ်။ (ဒီဆောင်းပါးရဲ့ပုဒ်မ ခွဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီကျော်ဖတ်လိုရင် ရပါတယ်။)
၁။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ က သမ္မာကျမ်းစာကို ဘယ်လိုထောက်ခံသလဲ?
၂။ သမ္မာကျမ်းစာဟာ ကာလတလျှောက် ပြောင်းလဲခဲ့သလား၊ သို့မဟုတ် မူရင်းရေးသားချက်အတိုင်း ဖြစ်နေတုန်းပဲလား?
၃။ ယေရှုအကြောင်း ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ ကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား?
၄။ သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှုအကြောင်းပြောပြတာတွေကို သမိုင်းသုတေသီများ က အတည်ပြုပါသလား?
၅။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဝိရောဓိများ (ရှေ့နောက်ကျိုးကြောင်းမညီညွှတ်ခြင််းများ) ပါရှိပါသလား?
၆။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များ ကို ဘယ်လိုစီစဉ်ချမှတ်ခဲ့ကြသလဲ? ယုဒခရစ်ဝင်ကျမ်း ဘာလို့မပါဝင်ရသလဲ?
၇။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရေးဖို့ နှစ်ပေါင်း ၃ဝ မှ ၆ဝ မျှ ဘာကြောင့်ကြာရှည်ခဲ့ရသလဲ?
၈။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ယေရှုအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်၊ ဟောပြောခဲ့သလား ဆိုတာ ဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသလဲ?
၁။ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာက သမ္မာကျမ်းစာကို ဘယ်လိုထောက်ခံသလဲ?
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာက သမ္မာကျမ်းစာဟာ ကျနော်တို့ထံဘုရားသခင်ရေးတဲ့စာဖြစ်တယ်လို့ သက်သေမပြ နိုင်ပါဘူး။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာမှန်ကန်မှုကို အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံ သက်သေပြနိုင် (ပြလည်းပြ) ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသီများက ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ အစိုးရအရာရှိများ၊ ဘုရင်များ၊ မြို့များနဲ့ ပွဲတော်များရဲ့အမည်နာမများကို တောက်လျှောက် ရှာဖွေတွေ့ရှိလာကြပါတယ် --- တခါတလေ သမိုင်းပညာ ရှင်များကပင် အဲဒီလိုလူတွေ (သို့) နေရာတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားမိခဲ့ကြပါဘူး။ ဥပမာ၊ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ကျမ်းက ယေရှု ဘေသေသဒရေကန်နားမှာ မသန်စွမ်းသူတစ်ယောက်ကို ကုသတယ်လို့ပြောတယ်။ ကျမ်းစာသားက ရေကန်ဆီသွားတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာ ကနားပြင် (စင်္ကြံ) ငါးဆောင်ရှိတယ်လို့တောင် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပညာရှင် များက အဲဒီကန်ရှိတယ်လို့ ထင်မထားခဲ့ကြဘူး၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များက ဒါကို မြေအောက်ပေ ၄ဝ အနက်မှာ ကနားပြင်ငါးခုနဲ့တကွ တွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့အချိန်ထိပေါ့။၁
သမ္မာကျမ်းစာဟာ သမိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ်းစာဖော်ပြ တဲ့အရာအားလုံးကို ရှေးဟောင်းသုတေသနအားဖြင့် အကုန်တွေ့ရှိသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းတွေ့ရှိချက်တိုင်းက သမ္မာကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာနဲ့ မကိုက်ညီတာ ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။
နှိုင်းယှဉ်ချက်အားဖြင့်၊ သတင်းထောက်သစ် လီစထရောဘယ်လ်က မောရ်မွန်းကျမ်းစာကို မှတ်ချက်ချထားတာက - “ရှေးဟောင်းသုတေသနပြုခြင်းက ၎င်း (မောရ်မွန်းကျမ်းစာ) ဖော်ပြထားတဲ့ ရှေးယခင််က အမေရိကားမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ တယ်လို့ယူဆတဲ့ အဖြစ်အပျက်များကို သက်သေပြနိုင်ဖို့ အဖန်တလဲလဲ ကျရှုံးခဲ့ပါတယ်။ မောရ်မွန်းဘာသာရဲ့အဆို များကိုထောက်ခံတဲ့ အထောက်အထားများရှိမလားလို့ စမစ်ဆိုနီယန်တက္ကသိုလ်ကို ကျနော်စာရေးခဲ့တာ သတိရတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသီများက ကမ္ဘာသစ် (New World) ရဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်နဲ့ မောရ်မွန်းကျမ်းအဆိုတို့ကြားမှာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ချက် ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးလို့ အတိအလင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။” လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများက မောရ်မွန်းကျမ်းစာ (the Book of Mormon) ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ မြို့တွေ၊ လူတွေ၊ နာမည်တွေနဲ့ နေရာတွေကို မြေပုံမညွန်းဆိုခဲ့ဖူးကြပါဘူး။၃
ဓမ္မသစ်သမ္မာကျမ်းထဲကတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာ ရှင်လုကာပြောထားတဲ့ ရှေးနေရာဒေသတွေအများကြီးကိုတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသနအားဖြင့် ဖော်ထုတ်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ “တစ်အုပ်လုံးအနေဖြင့် ရှင်လုကာသည် နိုင်ငံပေါင်း ၃၂၊ မြို့ပေါင်း ၅၄ နှင့် ကျွန်း ၉ ကျွန်းတို့ကို အမှားအယွင်းမရှိ အမည်တပ်ပြောပြပေသည်။”၄
ရှေးဟောင်းသုတေသနက သမ္မာကျမ်းစာအကြောင်း မဟုတ်မမှန်သင်ကြားတဲ့သီအိုရီတွေကိုလည်း ချေပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ၊ ယနေ့ တချို့ကောလိပ်တွေမှာသင်ကြားနေဆဲသီအိုရီတစ်ခုက မောရှေ(မိုးဇက်)က ပင်တေတျုချ် (သမ္မာကျမ်း စာရဲ့ပထမဆုံးကျမ်းအုပ်ငါးစောင်) ကို ရေးခဲ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ခေတ်မှာစာပေအရေးအသား မတီထွင်ခဲ့သေးဘူးလို့ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းသုတေသီတွေက Black Stele ဆိုတဲ့ စာပေမှတ်တမ်းကျောက် ပြားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ “ယင်း၏အပေါ်တွင် သပ်(ရှည်သောသုံးထောင့်ပုံ) ပုံသဏ္ဌာန်အက္ခရာများရှိပြီး ဟမ္မူရာဘီ၏အသေးစိတ်ဥပဒေဿများပါရှိသည်။ ၎င်းမှာ မောရှေခေတ်နှောင်းလော? မဟုတ်ပါ! မောရှေခေတ် မတိုင်မှီကဖြစ်သည်။ ထို့ထက်မက အာဗြဟံ (ဘီစီ ၂ဝဝဝ) မတိုင်မှီကပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမှ အနည်းဆုံးသုံးရာစုနှစ် ကျော်လွန်ပြီး မောရှေ၏စာများသို့ရောက်သည်။”၅
ရှေးဟောင်းသုတေသနပြုချက်က သမ္မာကျမ်းစာရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှန်ကန်မှုကို အစဉ်တစိုက်အတည်ပြုနေ ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်လေ့လာမှုအတွက်၊ အဓိကကျသောရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်များတချို့ကို စာရင်းပြုစုထားသော ဇယားကွက်တစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
၂။ သမ္မာကျမ်းစာဟာ ကာလတလျှောက် ပြောင်းလဲခဲ့သလား၊ သို့မဟုတ် မူရင်းရေးသားချက်အတိုင်း ဖြစ်နေတုန်း ပဲလား?
ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ - တချို့လူတွေက သမ္မာကျမ်းစာဟာ “အကြိမ်ပေါင်းများစွာ” ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဘာသာပြန်မှုအဆင့်ဆင့်မှာပဲ မူရင်းအနက်ပျောက်ပျက်သွားပြီလို့ ယူဆတတ်ကြတယ်။ ဘာသာပြန်ချက်တွေဟာ အခြားဘာသာပြန်ချက်တွေကနေ လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ပြောတာမှန်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာပြန်ချက်တွေ ဟာ တကယ်တော့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရေးစာမူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ မူရင်းဂရိ၊ ဟေဗြဲ(ဟီဘရူး)နဲ့ အာရမိ အရင်းအမြစ်စာသားတွေကနေပဲ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဓမ္မဟောင်းသမ္မာကျမ်းရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုကိုတော့ ယနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့နောက်ဖက်ကမ်းရိုးတန်း (West Bank) တလျှောက်မှာ ၁၉၄၇ မှာတွေ့ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်တစ်ခုက အတည်ပြုပါတယ်။ “ပင်လယ်သေ စာလိပ်များ (The Dead Sea Scrolls)” က ကျနော်တို့မှာရှိသမျှ လက်ရေးစာမူတွေထက်ကို အနှစ် (၁ဝဝဝ) ပိုစောတဲ့ ဓမ္မဟောင်းသမ္မာကျမ်းဂန် ပါရှိပါတယ်။ အနှစ်တစ်ထောင်ပိုစောတဲ့ အဲဒီပင်လယ်သေစာလိပ်တွေနဲ့ ကျနော်တို့လက်ရှိ စာမူများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ ၉၉.၅% သဘောတူညီမှုရရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၅% ခြားနားချက်တွေကတော့ အသေးအဖွဲစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံခြားနားချက်တွေနဲ့ စာကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုမပြောင်းလဲ စေတဲ့ စာကြောင်းတည်ဆောက်ပုံလောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာဟာဆိုရင် လူသားတစ်ရပ်လုံးရဲ့ စိတ်ချယုံကြည်ရဆုံးသော ရှေးဟောင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာနဲ့ နီးကပ်စွာဇာစ်မြစ်ကာလသတ်မှတ်ထားတဲ့ ထောင်နဲ့ချီသောဓမ္မသစ်သမ္မာကျမ်းစောင်မိတ္တူတွေကို ကျနော် တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ပြောရရင်၊ ပလေတို (သို့) အရစ္စတိုတယ်လ် (သို့) ဟိုမာရဲ့အီလိယက်လို့ ကျနော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာတွေထက်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ကျမ်းရေးသူများမူလရေးသားခဲ့တဲ့အတိုင်းရှိနေဆဲပါ ဆိုတာ ပိုသေချာပါတယ်။ အခြားရှေးဟောင်းစာပေများနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းအားနှိုင်းယှဉ်ချက်အတွက် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
၃။ ယေရှုအကြောင်း ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသလား?
ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသူလေးယောက်က ယေရှုရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို တစ်ဦးစီ ကိုယ်ပိုင်အတ္ထုပတ္တိ ရေးခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒါတွေကို ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးဆူ၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ပထမလေးစောင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ ယေရှုရဲ့အတ္ထုပတ္တိတွေ တိကျမှန်ကန်တယ်လို့ ကျနော်တို့ဘယ်လိုသေချာပြောနိုင်ပါသလဲ?
အတ္ထုပတ္တိတစ်ခု ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလားလို့ သမိုင်းပညာရှင်တွေ ဆန်းစစ်တဲ့အခါ သူတို့က “ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်း တူညီတဲ့အသေးစိပ်အချက်အလက်ကို အခြားအရင်းအမြစ်ဘယ်လောက်များများက တင်ပြသလဲ?” လို့ မေးကြပါ တယ်။ ဒါကဒီလိုပါ။ သမ္မတဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီရဲ့အတ္ထုပတ္တိတွေကို သင်စုစည်းနေတယ်ဆိုပါစို့။ သူ့မိသားစုအကြောင်း၊ သူ့ရဲ့သမ္မတရာထူး၊ ကျူးဘားဒုံးကျည်အရေးကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့ အတ္ထုပတ္တိများ၊ ပြီးတော့ တူညီတဲ့အချက်တွေတင်ပြတဲ့ အတ္ထုပတ္တိတွေအားလုံးနီးပါးကို သင်ရှာရမှာပဲ။ အတ္ထုပတ္တိတစ်ခုက သူ တောင်အာဖရိက မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအဖြစ် ဆယ်နှစ်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ တင်ပြတာ သင်တွေ့ခဲ့ရင်ကော? ဒါပေမယ့် အခြားအတ္ထု ပတ္တိတွေက သူ့ဘဝတလျှောက်လုံး အမေရိကမှာ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောမယ်။ စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တဲ့သမိုင်းပညာရှင် တစ်ယောက်ကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသဘောတူကိုက်ညီတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကိုပဲ ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့ သူ့ဘဝအကြောင်း တူညီတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးတဲ့ အတ္ထုပတ္တိတွေ အများကြီးတွေ့ရ သလား? ဟုတ်ကဲ့၊ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါဇယားဟာ ယေရှုရဲ့အချက်အလက်များနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီအချက် တွေကို သူတို့အတ္ထုပတ္တိတွေတစ်ခုစီရဲ့ ဘယ်နေရာမှာပေးထားသလဲဆိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မဿဲ မာကု လုကာ ယောဟန်
ယေရှု အပျိုစင်တစ်ဦးမှမွေးဖွားခဲ့ ၁း၁၈-၂၅ - ၁း၂၇၊ ၃၄ -
ယေရှု ဗက်လင်မှာမွေးဖွားခဲ့ ၂း၁ - ၂း၄ -
နာဇရက်မှာနေထိုင်ခဲ့ ၂း၂၃ ၁း၉၊ ၂၄ ၂း၅၁၊ ၄း၁၆ ၁း၄၅၊ ၄၆
ယေရှု ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှာ နှစ်ခြင်းခံခဲ့ ၃း၁-၁၅ ၁း၄-၉ ၃း၁-၂၂ -
အနာငြိမ်းခြင်းအံ့ဖွယ်အမှုများပြုခဲ့ ၄း၂၄ စသည် ၁း၃၄ စသည် ၄း၄ဝ စသည် ၉းရ
ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့ ၁၄း၂၅ ၆း၄၈ - ၆း၁၉
လူငါးထောင်ကို မုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်နှင့်ကျွေးမွေး ၁၄းရ ၆း၃၈ ၉း၁၃ ၆း၉
သာမန်လူများကို သွန်သင်မှုပြု ၅း၁ ၄း၂၅၊ ရး၂၈ ၉း၁၁ ၁၈း၂ဝ
အချိန်ယူ ၉း၁ဝ၊ ၂၁း၃၁ ၂း၁၅၊ ၁၆ ၅း၂၉၊ ရး၂၉ ၈း၃
ဘာသာရေးအာဏာပိုင်များကို တရားချပြ ၁၅းရ ရး၆ ၁၂း၅၆ ၈း၁-၅၈
သူ့ကိုသတ်ရန်အကွက်ချ ၁၂း၁၄ ၃း၆ ၁၉း၄၇ ၁၁း၄၅-၅၇
လွှဲပြောင်း ၂ရး၁၊ ၂ ၁၅း၁ ၂၃း၁ ၁၈း၂၈
ယေရှု ကြာပွတ်ဖြင့်အရိုက်နှက်ခံရ ၂ရး၂၆ ၁၅း၁၅ - ၁၉း၁
ယေရှု ကွပ်မျက်ခံရ ၂ရး၂၆-၅ဝ ၁၅း၂၂-၃၇ ၂၃း၃၃-၄၆ ၁၉း၁၆-၃ဝ
ဂူသင်္ချိုင်းတစ်ခုတွင် မြှုပ်နှံ ၂ရး၅၇-၆၁ ၁၅း၄၃-၄၇ ၂၃း၅ဝ-၅၅ ၁၉း၃၈-၄၂
တပည့်တော်များထံပြန်လာ ၂၈း၁-၂ဝ ၁၆း၁-၂ဝ ၂၄း၁-၅၃ ၂ဝး၁-၃၁
ခရစ်ဝင်ကျမ်းအတ္ထုပတ္တိနှစ်စောင်ကို ယေရှုနဲ့ သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိကျွမ်းပြီး အတူခရီး သွားလာခဲ့ကြတဲ့ ရှင်မဿဲနဲ့ ရှင်ယောဟန်တို့က ရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အခြားနှစ်စောင်ကိုတော့ ယေရှုရဲ့တမန် တော်များရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေအရင်းအခြာများဖြစ်တဲ့ ရှင်မာကုနဲ့ ရှင်လုကာတို့က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ကျမ်းရေးသူတွေက သူတို့မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ အချက်တွေရဖို့ တိုက်ရိုက်အခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကနဦး အသင်းတော်က ဒီ ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးစောင်ကို လက်ခံခဲ့ကြတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယေရှုရဲ့ဘဝဇတ်ကြောင်း လူသိများပြီးသားအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေလို့ပါပဲ။
နောက်ပြီး၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေဟာ သတင်းပေးပို့ချက်များနဲ့တူပြီး၊ နေ့ရက်အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်မှတ်တမ်း တွေကို သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုယ်စီအတိုင်း တင်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းရေးသူတစ်ဦးစီရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေ တမူထူးခြားနေကြပေမယ့် အချက်အလက်တွေကတော့ သဘောတူညီမှုရှိကြတယ်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများဟာ သမိုင်း သုတေသီများနဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသီများက မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုကြတဲ့ တိကျတဲ့ပထဝီဝင်အမည်နာမများနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးစိပ်အချက်တွေကို ပေးပါတယ်။
ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ခုမှ နမူနာတစ်ခုကြည့်ရန်အတွက်၊ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
၄။ သမ္မာကျမ်းစာက ယေရှုအကြောင်းပြောပြတာတွေကို သမိုင်းသုတေသီများက အတည်ပြုပါသလား?
သမ္မာကျမ်းစာက အံ့ဖွယ်အမှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နာဇရက်မြို့သားယေရှုဟာ ရောမစစ်သားတွေရဲ့ကွပ်မျက်ခြင်း ကိုခံရပြီး သေရာမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းပေးပို့ပါတယ်။ ရှေးယခင်သမိုင်းပညာရှင်မြောက်များစွာက ယေရှုနဲ့သူ့နောက်လိုက်များ ဘဝအကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာရဲ့တင်ပြချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာအတည်ပြုကြပါတယ်။
ပထမရာစုနှစ်ရောမရဲ့သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကော်နဲလိယပ်စ်တာဆီးတုစ် (အေဒီ ၅၅-၁၂ဝ) ကို ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ အကြောင်း အမှန်ကန်ဆုံးသမိုင်းပညာရှင်အဖြစ် ခံယူပါတယ်။၆
တာဆီးတုစ်ရဲ့ကောက်နှုတ်ချက်တစ်ခုမှာ ရောမဘုရင်နီရိုက “ခရစ်ယာန်များဟုခေါ်သော… လူတန်းစားတစ်ရပ်အပေါ် အကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်၏နာမအရင်းခံထွက်ပေါ်ရာ ခရစ္စတုစ် [ခရစ်တော်] မှာမူ တိုင်ဘေးရီးယပ်စ်စိုးစံစဉ်တွင် ကျွန်တော်တို့၏ ပြည်သူ့တရားစီရင်သူများမှတစ်ဦးဖြစ်သူ ပွန်တိယုစ် ပိလသုစ် (ပိလပ်မင်း) … ၏လက်၌ အစွန်းရောက်အပြစ်ဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရသည်။”၇
ဂျူးသမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖလားဗီးယုစ်ဂျိုးဆဲဖုစ် (အေဒီ ၃၈-၁ဝဝ) က သူ့ရဲ့ဂျုးရှေးခေတ်အကြောင်း (Jewish Antiquities) မှတ်တမ်းမှာ ယေရှုအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဂျိုးဆဲဖုစ်ဆီက၊ “ယေရှုသည် အံ့ဖွယ်ဘနန်းစွမ်း ဆောင်မှုများပြုလုပ်၊ လူများစွာကိုသွန်သင်၊ ဂျုး(ယုဒ)နှင့်ဂရိလူမျိုးများမှ နောက်လိုက်များစွာရရှိခဲ့သည့် ပညာရှိတစ်ပါး ဖြစ်သည်၊ မေရှိယဟု ယုံကြည်ခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်၊ ဂျုးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များမှ စွဲချက်တင်ခဲ့ကြသည်၊ ကားစင် တင်သတ်ခြင်းခံစေရန် ပိလပ်မင်းမှ စီရင်ချက်ချခဲ့ပြီး၊ ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်မှတ်ယူခံရသူ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါသည်”၈ လို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆူတိုးနီးယပ်စ်၊ ပလိုင်နီသယန်းဂါးနဲ့ သာလုစ်တို့ကလည်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းဖြစ်စဉ်များနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ခရစ်ယာန်ဝတ်ပြုကိုး ကွယ်ခြင်းနဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းများအကြောင်းကို ရေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျူးရှေးဟောင်းဓလေ့ထုံးတမ်းဥပေဒကျမ်းကပင် ယေရှုအပေါ်ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိဘဲ သူ့ဘဝရဲ့အဓိကအဖြစ်သနစ် များအကြောင်း သဘောတူမှတ်သားထားပါတယ်။ ထိုကျမ်းကနေ၊ “ယေရှုသည် ထိမ်းမြားလက်ထပ်မှုအားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မွေးဖွားခဲ့သည်၊ နောက်လိုက်သာဝကများ ရရှိခဲ့သည်၊ သူ့ကိုယ်သူဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်မှုများ ပြုခဲ့သည်၊ ထို့ပြင် အံ့ဖွယ်ပြဋိဟာများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော် ထိုအံ့ဖွယ်အမှုများမှာ ဘုရားသခင်မှလာသည်မဟုတ်ဘဲ စုန်းကဝေအတတ်မှဖြစ်သည်။”၉
ရှေးအကျဆုံးသမိုင်းပညာရှင်များဟာ ရောမအင်ပါယာရဲ့ဝေးလံနယ်မြေဒေသတွေဆီက မထင်ရှားတဲ့ ဂျူးဘာသာရေး ဆရာ ရဟူဒီများအပေါ်မှာမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးခေါင်းဆောင်များပေါ်မှာသာ အာရုံစိုက်မှတ်သားခဲ့ကြတာကို ထောက်ရှုရင် ဒါဟာ ထူးခြားတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ရှေးဟောင်သမိုင်းပညာရှင်များ (ဂျူးများ၊ ဂရိများနဲ့ ရောမများ) ကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သူများမဟုတ်တောင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာတင်ပြ ထားတဲ့ အဓိကအဖြစ်အပျက်များကို အတည်ပြုကြပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာ၏သမိုင်း - သမ္မာကျမ်းစာဟာ ကျိုးကြောင်းမညီညွှတ်တဲ့အချက်တွေ ပြည့်နေတယ်လို့ တချို့ပြောဆိုကြ တဲ့အခါ ဒါဟာလုံးဝမမှန်ပါဘူး။ အပြင်ပန်းအားဖြင့်ကျိုးကြောင်းမညီညွှတ်သယောင်ရှိတဲ့ အရေအတွက်ဟာ သမ္မာ ကျမ်းစာရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ခြုံငုံတဲ့အတိုင်းအတာအတွက် အမှန်တကယ် သိသိသာသာကို နည်းပါးပါတယ်။ အပြင်ပန်း ကွာဟခြားနားချက်တွေ ရှိနေတာဟာ ရှုံးနိမ့်ဖို့အစား စိတ်ဝင်စားစရာပဲပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဘယ်အဓိက အဖြစ်အပျက် (သို့) ဘယ်ယုံကြည်မှုအခြေခံတစ်ခုကိုမျှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။
ကွဲလွဲချက်လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဥပမာတစ်ခုကဒီလိုပါ။ ပိလပ်မင်းက ယေရှုကိုတင်ထားတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အမှတ် ကမ္ဗည်းတစ်ခု ချိတ်ဆွဲထားရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်တယ်။ အဲဒီဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှာရေးထားတာကို ခရစ်ဝင်ကျမ်းသုံးခုက မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်-
ရှင်မဿဲထဲမှာ - “ဤသူသည် ယုဒရှင်ဘုရင်၊ ယေရှုပေတည်း”
ရှင်မာကုထဲမှာ - “ယုဒရှင်ဘုရင်”
ရှင်ယောဟန်ထဲမှာ - “ယုဒရှင်ဘုရင်၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှု”
အသုံးအနှုန်း မတူညီဘူး၊ ဒါကြောင့် အပြင်ပန်းကွဲလွဲချက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိသာတဲ့အရာကတော့ အဲဒီကျမ်းရေး သူသုံးယောက်စလုံးက အဲဒီလိုအသေးစိပ်နဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုထဲကို ဖော်ပြကြတာက -- ယေရှုကွပ်အဆုံးစီရင်ခံခဲ့ တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအပေါ်မှာ အားလုံးသဘောတူညီပါတယ်။ သူတို့က ကားတိုင်မှာကမ္ဗည်းတစ်ခုထိုးထားတယ်၊ ပြီးတော့ စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်း သုံးကျမ်းစလုံးမှာအတူတူပါပဲ ဆိုတာတောင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတာကလား!
တိကျတဲ့အသုံးအနှုန်းပြဿနာကကော? ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရဲ့မူရင်းဂရိဘာသာမှာ သူတို့က ယနေ့ကျနော်တို့ တိုက်ရိုက်ကိုးကားချက်ပြတဲ့အခါသုံးသလို မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်တွေ မသုံးကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေး သူတွေက စာပိုဒ်တွေထဲမှာ မသိမသာကွာဟမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ သွယ်ဝိုက်ကိုးကားချက်ကိုပဲ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အပြင်ပန်းကွဲလွဲချက်ဥပမာတစ်ခုကဒီလိုပါ။ ယေရှုဟာ သူရှင်ပြန်မထမြောက်မှီ ဂူသင်္ချိုင်းထဲမှာ နှစ်ညနေ ခဲ့သလား (သို့) သုံးညနေခဲ့ပါသလား? ယေရှုက သူကားစင်တင်သတ်ခြင်းမခံရခင်မှာ၊ “ယောနသည် ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာ သုံးရက်(နှင့်သုံးည)နေရသကဲ့သို့၊ လူသား[သူ]သည် မြေကြီးထဲမှာ သုံးရက်နေရလတ္တံ့။ (မဿဲ ၁၂း၄ဝ)” လို့ ပြောခဲ့ တယ်။ ယေရှုပြောခဲ့တဲ့တခြားမိန့်ဆိုချက်ကို ရှင်မာကုက “လူသားသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့ လက်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုသူတို့သည် သေပြစ်ကိုစီရင်၍ တစ်ပါးအမျိုးသားတို့လက်သို့ အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ သူတို့ သည်လည်း လူသားအား ပြက်ရယ်ပြုခြင်း၊ ရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ တံတွေးနှင့်ထွေးခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို ပြုကြလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်ဟူ၍ မိမိကိုယ်၌ရောက်လတ္တံ့သော အမှုအရာတို့ကို တပည့်တော်တို့ အား မိန့်တော်မူ၏။” (မာကု ၁ဝး၃၃၊ ၃၄)
ယေရှုဟာ သောကြာနေ့မှာအသတ်ခံရပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်သွားမှန်း တနင်္ဂနွေနေ့မှာ တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်။ ဒါဆို သင်္ချိုင်းဂူထဲမှာ သုံးရက်နဲ့သုံးညနေတာ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ? အမှန်တော့ နေ့တစ်နေ့ (သို့) ညတစ်ညရဲ့ဘယ်အပိုင်းကို မဆို တစ်နေ့တာနဲ့တစ်ညတာအပြည့်လို့ တွက်လေ့ရှိတာဟာ ယေရှုခေတ်တုန်းက ဂျူးတွေရဲ့ဓလေ့သုံးစကားပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သောကြာ၊ စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေကို ယေရှုတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ သုံးရက်နဲ့သုံးညလို့ ခေါ်ရမယ်ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ကျနော်တို့ အဲဒီနည်းအတိုင်း ပြောတတ်ကြတယ် -- လူတစ်ယောက်က “တစ်နေ့လုံးစျေးဝယ် သွားတယ်” လို့ပြောတယ်ဆိုရင် သူက ၂၄ နာရီစလုံးကို မဆိုလိုဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့နားလည်ပါတယ်။
၆။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များ ကို ဘယ်လိုစီစဉ်ချမှတ်ခဲ့ကြသလဲ? ဘာကြောင့် အပေါခရိဖာ[ကျမ်းပယ်]၊ ရှင်ယုဒခရစ် ဝင်ကျမ်း (သို့) ရှင်သောမခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေကို လက်မခံရသလဲ?
ကျမ်းပယ် - ရှင်သောမခရစ်ဝင်ကျမ်း - ယနေ့မြင်ရတဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအုပ်စာရင်းကို ယုံကြည်လက်ခံရတဲ့အပေါ် ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိတယ်။ ကနဦးအသင်းတော်က ဓမ္မသစ်ကျမ်းအုပ်များကို ရေးပြီးလျှင်ပြီးချင်းဆိုသလို လက်ခံခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကျမ်းရေးသူတွေဟာ ယေရှုကိုယ်တိုင် (သို့) သူ့ရဲ့လတ်တလောနောက်လိုက်များရဲ့ မိတ်ဆွေများဖြစ်ပြီး၊ ယေရှုကိုယ်တိုင် ကနဦးအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် စိတ်ချအပ်နှံခဲ့တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်း ရေးသူ ရှင်မဿဲနဲ့ ရှင်ယောဟန်တို့ဟာ ယေရှုရဲ့အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်သူများထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ရှင်မာကုနဲ့ ရှင်လုကာတို့ဟာလည်း တမန်တော်တွေရဲ့အဖော်တွေပဲဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီတမန်တော်များထံကနေ ယေရှုသက်တော်စဉ်ကို သိခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။
အခြားဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသူတွေလည်း ယေရှုအကြောင်း တိုက်ရိုက်သိခွင့်ရခဲ့ကြသူတွေပါ- ရှင်ယာကုပ်နဲ့ ရှင်ယုဒတို့ဟာ အစပိုင်းမှာ ယေရှုကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့ ယေရှုရဲ့အမေတူအဖေကွဲညီအစ်ကိုတွေဖြစ်ကြတယ်။ ရှင်ပေတရုကတော့ တမန်တော်ဆယ့်နှစ်ပါးထဲက တစ်ပါးပါ။ ရှင်ပေါလုလည်း ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုကို ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်အဖြစ် အစပြုခဲ့ပြီး ဘာသာရေးအာဏာပိုင် အတန်းအစားထဲက အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ယေရှုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ခဲ့တာ သိရတဲ့အတွက် ယေရှုရဲ့ဇောသန်တဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့တင်ပြချက်တွေဟာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အဆိုတွေနဲ့ပဲ တန်းစီနေ တာဖြစ်တယ်။ အခြားစာအုပ်တွေ နှစ်ရာချီကြာပြီးမှ ရေးသားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ အသင်းတော်အနေနဲ့ ဒါတွေဟာ အတုအယောင်တွေပဲလို့ ရိပ်စားမိဖို့ မခက်ခဲပါဘူး။ ဥပမာ၊ ရှင်ယုဒခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုရင် ရှင်ယုဒကိုယ်တိုင် သေဆုံးပြီး များစွာအကြာ အေဒီ ၁၃ဝ-၁ရဝ ဝန်းကျင်မှာ နော့စ်တစ်ဂိုဏ်းက ရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရှင်သောမခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာ လည်း အေဒီ ၁၄ဝ လောက်မှာ တမန်တော်တစ်ဦးရဲ့အမည်ကို မမှန်မကန်သုံးထားတဲ့ အတုအယောင်စာတစ်စောင် ဖြစ်တဲ့ အခြားသာဓကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေနဲ့ နော့တစ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေဟာ ယေရှုရဲ့ထင်ရှားတဲ့ တရားတော်တွေနဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲပြီး၊ သမိုင်းနဲ့ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အမှားများစွာ မကြာခဏပါရှိနေ တာတွေ့ရပါတယ်။၁ဝ
အေဒီ ၃၆၇ မှာ၊ အသနေးရှပ်စ်က (ကျနော်တို့ ယနေ့ရှိတဲ့စာရင်းလိုပဲ) ဓမ္မသစ်ကျမ်းအုပ် ၂၇ အုပ်ကို တရားဝင်စာရင်း စီစဉ်ပြုစုခဲ့တယ်။ များမကြာခင်၊ ဂျေရုမ်းနဲ့ သြဂတ်စတင်းတို့လည်း တူညီတဲ့စာရင်းကိုပဲ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစာရင်းများ ခရစ်ယာန်အများစုအတွက် လိုအပ်တဲ့အရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခြုံကြည့်ရရင် အသင်းတော် တစ်ခုလုံးက ခရစ်တော်အပြီး ပထမရာစုကတည်းက ဒီတူညီတဲ့စာအုပ်စာရင်းတွေကိုပဲ အသိအမှတ်ပြုပြီး အသုံးပြုခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတော်ဟာ ဂရိစကားပြောဒေသတွေကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို ဘာသာပြန်ဆိုဖို့ လိုအပ်ခဲ့တဲ့အခါ၊ ပြီးတော့ ခွဲထွက်သွားတဲ့ ဂိုဏ်ဂဏတွေရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးကျမ်းပြိုင်စာအုပ်တွေ ဆက်တက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့အခါ တိကျတဲ့စာရင်းတစ်ခု ရှိဖို့ဆိုတာ ပိုအရေးကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ - ယေရှုသေခြင်းနဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးလျှင်ပြီးချင်း ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေ မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိက အကြောင်းကတော့ အဲဒီလိုရေးဖို့ သိသာတဲ့လိုအပ်ချက် မရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ အစပိုင်းမှာ ဧဝံဂလိတရားဟာ ယေရုရှလင်မှာ နှုတ်စကားအားဖြင့် ပျံ့နှံ့ခဲ့တယ်။ ယေရှုဘဝအကြောင်း စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးဖို့ မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယေရုရှလင်ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေက ယေရှုကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းကို ကောင်းကောင်းသတိထားမိခဲ့ကြတာပါ။၁၁
ဒါပေမယ့် ဒီဧဝံဂေလိတရားဟာ ယေရုရှလင်ကိုကျော်လွန်ပျံ့နှံ့သွားပြီး မျက်မြင်သက်သေများကို အလွယ်တကူ မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ အချိန်မှာတော့ ယေရှုရဲ့အသက်တာနဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းအကြောင်း အခြားသူများကိုသိစေဖို့ စာမှတ်တမ်းတွေ လိုအပ်လာပါတယ်။ ပညာရှင်များစွာက ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းစောင်တွေကို ယေရှုကောင်းကင်တက်ကြွပြီး အနှစ် ၃ဝ နဲ့ ၆ဝ ကြားမှာရေးသားခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။
ခရစ်ဝင်ကျမ်းအစမှာ ရှင်လုကာက ဘာကြောင့်ဒါကိုသူရေးခဲ့သလဲဆိုတာ- “မြတ်သောသော်ဖိလု၊ ငါတို့၌ထင်ရှား ပြည့်စုံခဲ့သောအကြောင်းအရာများကို မူလမျက်မြင်သက်သေများနှင့် နှုတ်ကပတ်တရားတော်၏အမှုကို ဆောင်ရွက် သောသူတို့က ငါတို့အားဟောပြောခဲ့သည့်အတိုင်း စီကုံးရေးသားရန် လူအများတို့သည် ကြိုးစားကြသည်ဖြစ်၍ အလုံးစုံတို့ကို အစမှစ၍ သေချာစွာစိစစ်လေ့လာခဲ့သောငါသည်လည်း အသင်သင်ယူခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာများ ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိစေရန် ၎င်းတို့ကိုအသင့်ထံ အစဉ်လိုက်ရေးသားသင့်သည်ဟု ထင်မှတ်ပါ၏။” (မြန်မာ့စံမီ သမ္မာကျမ်း)၁၂
ဓမ္မသစ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများမှ တစုံတရာ သင်ဖတ်ခဲ့ဖူးပါသလား? ရှင်ယောဟန်ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာ နမူနာတစ်ခုကိုဖတ်ရှု ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ယေရှုအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤဆောင်းပါး၌ ယေရှုအသက်တာအကြောင်း ထိမိတဲ့အနစ်ချုပ်ကို သင်ဖတ်ရှုနိုင် ပါတယ်- မျက်ကန်းယုံကြည်မှု၏အလွန်
ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ - ဟုတ်ကဲ့။ ယုံကြည်မှုတစ်ခု တန်ဖိုးအမှန်ရှိဖို့ရာအတွက် ၎င်းဟာ အချက်အလက်မှန်တွေ (သို့) စစ်မှန်မှုအပေါ်မှာ အခြေခံရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုပါ။ သင် လန်ဒန်သွားတဲ့လေယာဉ်ကိုစီးတော့မယ် ဆိုရင် လေယာဉ်ဟာဆီဖြည့်ထားတယ်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ချရတယ်၊ လေယာဉ်မှူးဟာ လေ့ကျင့်ထားတယ်၊ ပြီးတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဘယ်အကျန်းဖက်သူမှမပါဘူးဆိုတာ သင်ယုံကြည်မှုရှိကောင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ယုံကြည်မှုဟာ လန်ဒန်ကိုဘာကသယ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုကြောင့် လေယာဉ်ပေါ် ရောက်လာတာဟုတ်ပါတယ်။ လန်ဒန်ကိုအမှန်တကယ်သယ်ဆောင်သွားတာကတော့ လေယာဉ်၊ ပိုင်းလော့ စတာ တွေအပေါ် သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ပျံသန်းမှုတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံအပေါ် သင်မှီခိုကောင်းမှီခိုနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အတွေ့အကြုံကောင်းက သင့်အားအဲဒီလေယာဉ် လန်ဒန်ရောက်အောင် ပို့မပေးနိုင်ပါဘူး။ အရေးကြီး တာက သင့်ယုံကြည်မှုအရာ -- အဲဒါစိတ်ချရပါသလား?
ဓမ္မသစ်ကျမ်းဟာ ယေရှုအကြောင်း မှန်ကန်ပြီးစိတ်ချရတဲ့တင်ပြချက် ဟုတ်ပါသလား? ဟုတ်ကဲ့။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို သင်စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စိတ်ချနိုင်ဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ထောက်ခံချက်များစွာ ပေးနေ ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးက ဒီအချက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်- သမိုင်းပညာရှင်များ၏သဘောချင်း ကိုက်ညီမှု၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန၏ ကိုက်ညီမှုများ၊ အတ္ထုပတ္တိခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းလုံးက သဘောတူညီတယ်၊ မှတ်တမ်းစာမူတွေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တာထူးခြားလှတယ်၊ ပြီးတော့ ဘာသာပြန်ချက်တွေမှာ မဟာတိကျမှန်ကန်မှုရှိ ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေအားလုံးက ကျနော်တို့ယနေ့ဖတ်ရှုနေတဲ့အရာဟာ မူရင်းကျမ်းရေးသူတွေကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ဘဝ တကယ့်နေရာဒေသတွေမှာ ကြုံတွေ့ရေးသားခဲ့ကြတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက် ခိုင်မာတဲ့အခြေခံ အုတ်မြစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကျမ်းရေးသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရှင်ယောဟန်က ကောင်းစွာပေါင်းရုံးသုံးသပ်ပါတယ်- “ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသော အခြားနိမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်း ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူ၏။ ယေရှုသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကို သင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်း၊ ထိုသို့ယုံ၍ နာမတော်အားဖြင့် အသက်ကိုရမည်အကြောင်း၊ ဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသတည်း။”
(၁) Strobel, Lee. “The Case for Christ” (Zondervan Publishing House, ၁၉၉၈), စာမျက်နှာ-၁၃၂။
(၂) ကျော်ကြားသောဂျူးလူမျိုးရှေးဟောင်းသုတေသီ Nelson Glueck က ဤသို့ရေးသားခဲ့သည်- “ဘယ်ရှေးဟောင်းသုတေသနရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကမှ ကျမ်းစာ၏ရည်ညွှန်းပြောဆိုချက်အား လုံးဝမဆန့်ကျင်ခဲ့ဖူးပါဟု တိကျပြတ်သားစွာ ပြောရမည်ဖြစ်သည်။” McDowell, Josh မှ ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။
(၃) Strobel, စာ-၁၄၃-၁၄၄။
(၄) Geisler, Norman L. “Baker Encyclopedia of Christian Apologetics” (Grand Rapids: Baker, ၁၉၉၈)။
(၅) McDowell, Josh. “Evidence That DemandsaVerdict” (၁၉၇၂)၊ စာ-၁၉။
(၆) McDowell, Josh. “The New Evidence that DemandsaVerdict” (Thomas Nelson Publishers, ၁၉၉၉)၊ စာ-၅၅။
(၇) Tacitus, A. 15.44.
(၈) Wilkins, Michael J. နှင့် Moreland, J.P. “Jesus Under Fire” (Zondervan Publishing House, ၁၉၉၅)၊ စာ-၄ဝ။
(၉) အထက်၌ဖော်ပြခဲ့ပြီးသောစာအုပ်နှင့် ယင်းစာမျက်နှာ။
(၁ဝ) Brusce, F.F. “The Books and the Parchments: How We Got Our English Bible” (Fleming H. Revell Co., ၁၉၅ဝ) စာ-၁၁၃။
(၁၁) တမန်တော်ဝတ္ထု ၂း၂၂။ ၃း၁၃၊ ၄း၁၃၊ ၅း၃ဝ၊ ၅း၄၂၊ ၆း၁၄ စသည်တို့ကို ရှုပါ။
(၁၂) ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁း၁-၃
(၁၃) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၂ဝး၃ဝ၊ ၃၁